‘हिन्दु राष्ट्र’को पक्ष/विपक्षमा ध्रुवीकरण बढ्दै – कर्णाली 24 डट कम
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली प’क्राउ
नायिका रेखा थापा राप्रपा पार्टीको महामन्त्री पदमा उठ्दै
फेरि एक महिना सडक बन्द
“सालि माथि” कैलालीमा अर्को काण्ड
जुम्लामा बस पल्टिँदा २ काे मृत्यु
धर्म परिवर्तन गराएको कसुरमा पास्टर केशव आचार्यलाई २ वर्ष कैद
अफ्रिकाबाट आएका ६ जना त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फ’रार, ओ’मिक्रोन फैलन सक्ने त्रा’स
काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा टाउकाको फुटाईयाे
कसैले माग्दा नि पाएनन् त कसैले दिंदा नि लिएनन् ओलीले दिएको केन्द्रीय सदस्य
Karnali 24१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:३३
काठमाडौं, १६ जेठ । नेपालको राजनीतिमा धर्म मुख्य मुद्दाका रुपमा विकास भएको छ । नेताहरु नै यसबारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस गर्न थालेका छन् ।
हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा अहिलेसम्म मुख्य दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि खुलेको छ । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताहरुमात्र खुलेरै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा देखिएका छन् । तर, घटना यसरी विकास हुँदै गएको छ कि देश अब हिन्दु राष्ट्रको पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ ।
हिन्दु राष्ट्र ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग प्रतिवद्धता जनाइसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय पत्रिकामा लेखमार्फत् उल्लेख गरेका छन् । उनले रासस र विश्व हिन्दु परिषद्को चर्को आलोचना समेत गरे ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमा पशुपतिनाथका लागि ३५ करोड विनियोजन गरे । अयोध्यापुरीमा राममन्दिर निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् । ओलीले पछिल्लो समय हिन्दुत्वको मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् ।
ओलीसँग जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नजिकिएका छन् । ठाकुर पछिल्लो समय गेरुवस्त्रमा बढी देखिन्छन् । राजेन्द्र महतो पनि हिन्दुत्वको मुद्दासँग सहमत छन् ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष भने हिन्दुराष्ट्रको विपक्षमा छ । जसपामा बाबुराम भट्टराई, अशोक राईलगायत नेताहरु धर्मनीरपेक्ष बचाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
नेपाली काँग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा धर्मको मुद्दामा खुलेका छैनन् । रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरु धर्मनीरपेक्षकै पक्षमा छन् ।
प्रकाशमान सिंह धर्मको मुद्दामा मौन देखिएका छन् । डा.शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, शंकर भण्डारीलगायतका नेताहरु हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा देखिएका छन् । विमलेन्द्र निधि धर्म नीरपेक्षको पक्षमा छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धर्मबारे खुलेका छैनन् । यद्यपि, उनका अभिव्यक्तिहरु हिन्दुत्वको पक्षमा देखिन्छ । सुभाषचन्द्र नेम्वाङ धर्मनीरपेक्षको पक्षधर हुन् । तर, उनी पछिल्लो समय धर्मबारे बोल्न छाडेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र धर्मनीरपेक्षताको पक्षमा छ । अध्यक्ष प्रचण्डले खुलेरै धर्मनीरपेक्षमाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिमा धर्मको मुद्दाले जर्बजस्त प्रभाव बनाउँदै जाँदा अब हुने चुनावको मुख्य मुद्दा नै बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यसैतर्फ दल र नेताहरु ध्रुवीकृत हुन थालेका छन् ।
दलितलाई कोठ भाडामा नदिने पक्राउ।
६ असार २०७८, आईतवार २१:२२
खुकुरी प्रहार बाट युवा घाईते
२९ असार २०७८, मंगलवार २२:३४
कोहलपुर ओपन क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा कोहलपुर क्रिकेट एकेडेमी र बिबि वारियर्स
२४ पुष २०७७, शुक्रबार १९:०१
नेपालमा कोरोना महामारीको कारण ब्रिटिस र सिंगापुर भर्तीको मिति सर्यो।
२५ बैशाख २०७८, शनिबार २२:३८
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली प’क्राउ १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:३३
नायिका रेखा थापा राप्रपा पार्टीको महामन्त्री पदमा उठ्दै १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:३३
फेरि एक महिना सडक बन्द १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:३३